Little Kong Isibani - Umagazini Design
Sonto 19 Disemba 2021
Isibani ILittle Kong iluchungechunge lwamalambu asendaweni aqukethe ifilosofi yasendulo. Ama-aesthetics aseMpumalanga akhokha ukunaka okukhulu ebuhlotsheni obuphakathi kwangempela nangempela, okugcwele nokungasho lutho. Ukufihla ama-LED ngobuqili esigxotsheni sensimbi akugcini ngokuqinisekisa ukungabi nalutho nokungcola kwesibani sesibani kodwa futhi kuhlukanisa iKong namanye amalambu. Abaqambi bathola ubuciko obunokwenzeka ngemuva kokuhlolwa okungaphezulu kwezikhathi ezingama-30 ukwethula ukukhanya nokukhanya okuhlukahlukene ngendlela efanele, okunika amandla isipiliyoni esimangazayo sokukhanyisa. Isisekelo sisekela ukushaja okungenantambo futhi sinembobo ye-USB. Ingavulwa noma icishwe nje ngokususa izandla.
Igama lephrojekthi : Little Kong, Igama labaklami : Guogang Peng, Igama leklayenti : RUI Design & Above Lights .
Imikhiqizo yokukhanyisa kanye namaphrojekthi ekhanyiso
Isibani Guogang Peng Little Kong